हे भगवान: शरीरमा उम्रिए रुखका हाँगा, २५ पटक गरीयो अपरे सन ! «
हे भगवान: शरीरमा उम्रिए रुखका हाँगा, २५ पटक गरीयो अपरे सन !
Published : 22 July, 2020 10:36 pm
दनियाँमा आश्चर्य लाग्दा मानिसहरु बस्छन् । कसैले खानेकुरा काँचै खान्छन् भने कोही आगोमा हाम फाल्छन् । तर एक व्यक्ति यस्ता पनि छन् जसको शरीरलाई भगवानले संरचना नै फरक ढंगले बनाइदिएका छन् । यी व्यक्ति बंगलादेशको हो । उजको शरीरमा रुखका जरा उम्रिएका छन् ।
अब्दुल बजनदारको शरीरको संरचना नै सामान्य मानिसको भन्दा अर्कै छ । वास्तवमा उनी रोगले गर्दा शरीर बिग्रिएको हो । आफ्नो अनावश्यक शरीर देखेर निकै चिन्तित छन् उनी । रोगको कारण हात र खुट्टामा रुखका हाँगा जस्ता आकृति उम्रिरहेको छ । उनले यसको उपचारमा २५ पटक अपरेसन गरिसकेका छन् । यद्यपि समस्या भने कम भएको छैन् ।
उनले दु खाई धेरै हुनाले रातभर सुत्न नसकेको बताउदै आएका छन् । अब्दुलले डाक्टरले हात का टेर फालिदिए केहि राहत हुने आशामा बा चेका छन् । यस्तो अजि बको रो गलाई डाक्टरहरुले एपिडर्मोडिसप्लासिया वेरु सीपारमिस नाम दिएका छन् ।
हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ। सुन्दर गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत
आज साउन को अन्तिम सोमबार यी ५ काम गर्नुहोस तपाइको मनोकांक्षा पूरा हुन्छ !
सोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन् । सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
आज साउनको अन्तिम सोम्बार यि काम गर्नुहोस, तपाइहरुको मनोकांक्षा पूरा हुनेछ !
सोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन्। सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। सोमबारको दिन
चलचित्र अभिनेत्री पूजा शर्मा रुँदै मिडियामा पुगेकी छिन् । ए पी वान टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने